အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ၁၉ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာခရီးသွားများအား ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြု - Xinhua News Agency
ဂျကာတာ ၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
COVID-19 ပိုးတွေ့ရှိမှုနှုန်း ၅ ရာခိုင်နှုန်းအောက် လျော့နည်းသည့် နိုင်ငံ ၁၉ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာခရီးသည်များအား အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခွင့်ပြုထားကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား ရေကြောင်း နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရေးရာ ညှိနှိုင်းရေးဝန်ကြီး Luhut Binsar Pandjaitan က အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် ဂျကာတာမြို့၌ ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။အဆိုပါနိုင်ငံများမှာ ဆော်ဒီအာရေဗျ ၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု(UAE) ၊ နယူးဇီလန် ၊ ကူဝိတ် ၊ ဘာရိန်း ၊၊ ကာတာ ၊ တရုတ် ၊ အိန္ဒိယ ၊ ဂျပန် ၊ တောင်ကိုရီးယား ၊ လစ်တန်စတိန်း ၊ အီတလီ ၊ ပြင်သစ် ၊ ပေါ်တူဂီ ၊ စပိန် ၊ ဆွီဒင် ၊ ပိုလန် ၊ ဟန်ဂေရီ နှင့် နော်ဝေးနိုင်ငံတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ဒီမူဝါဒက အထူးသဖြင့် ဘာလီနဲ့ Riau ကျွန်းတွေကို တိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှုတွေအတွက်သာ သက်ဆိုင်ပါတယ်။”ဟု ဝန်ကြီး Luhut Binsar Pandjaitan က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ နိုင်ငံတကာခရီးသွားများအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါ ကင်းရှင်းပြီး အပြည့်အဝ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားပါက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေး အာမခံ အပြင် ငါးရက်ကြာ quarantine အတွက် ကြိုတင်စာရင်းပေးထားသည့် နေရာ အထောက်အထားများ ရှိရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘာလီကျွန်းသည် နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားဧည့်သည် အများဆုံး လာရောက်သည့် အင်ဒိုနီးရှား ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံနှင့် ရေပြင်နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေသည့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနောက်ဘက်ရှိ Riau ကျွန်းများသည် နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားဧည့်သည် ဒုတိယအများဆုံး လာရောက်ကြောင်း သိရသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါအား ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်မှ စတင်၍ ဘာလီ နှင့် Riau ကျွန်းပြည်နယ်များသို့ နိုင်ငံတကာခရီးသည်များအတွက် လေကြောင်းပျံသန်းမှုများအား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Indonesia reopens door for int’l visitors from 19 countries: coordinating minister
JAKARTA, Oct. 14 (Xinhua) — International visitors from 19 countries withaCOVID-19 positivity rate of less than five percent have been allowed to come to Indonesia, Coordinating Minister for Maritime and Investment Affairs Luhut Binsar Pandjaitan said atameeting in Jakarta on Wednesday.
Indonesia reopens flights for international visitors in the two provinces starting from Oct. 14 as the COVID-19 pandemic has been under control. Enditem
Photo – Workers move an information screen at Ngurah Rai International Airport in Bali, Indonesia, Oct. 6, 2021. Indonesia will reopen international flights to Bali for foreign visitors from certain countries starting from Oct. 14 as the COVID-19 transmission has eased in the nation, Coordinating Minister for Maritime and Investment Affairs Luhut Binsar Pandjaitan said Monday. (Photo by Bisinglasi/Xinhua)